30 sanadood kaddib Berlusconi oo iska dhiibay hoggaanka AC Milan farriin sagootin ahna u diray taageerayaasha naadiga – Gool FM
30 sanadood kaddib Berlusconi oo iska dhiibay hoggaanka AC Milan farriin sagootin ahna u diray taageerayaasha naadiga
Haaruun Yuusuf April 13, 2017
(Milan), 13 Abriil 2017 –Waxaa maanta si rasmi ah loo shaaciyay in Milkiilihii hor ee kooxda AC Milan ee Talyaaniga Silvio Berlusconi uu naadigiisii ka iibiyay koox Maalgashadeyaal Shiinees ah, iyadoo Qoyska reer Berlusconi haatan wixii ka dambeeya aysan ku lug yeelan doonin maamulka kooxdan taariikhda weyn leh.
Haddaba maanta waxaa hormuudkii hore ee Milan, Silvio Berlusconi uu farriin qoraaleed sagootin ah taageerayaasha naadiga u soo mariyay boggiisa Facebook, waxaana uu ku bilaabay sidatan;
“Maanta, kaddib 30 sanadood, waxaan ka degayaa jagada Madaxweynenimo ee AC Milan, waxaan sidan sameynayaa anigoo dareemaya dareen xanuun leh, laakiin waxaan ka war hayaa in ciyaarta casriga ah iyo inaad ku loollanto heerarka ugu sarreeya Yurub iyo caalamka inay u baahan tahay maalgashi iyo dhaqaale uusan qoys qura dabooli karin”.
“Weligeey ma hilmaami doono shucuurtii iyo dareenkii AC Milan ay siin jirtay dhammaanteen, weligeey ma illoobi doono dhammaan dadka mahad celinta mudan, maadaama aan awood u helay inaan hoggaamiyo naadigan ku guuleystay koobabka badan” ayuu sii raaciyay Berlusconi.
“Marka ugu horreysa, dabcan waxaan xusayaa tababareyaashii iyo halyeeyadii suurtogalka ka dhigay guulahan abid baaqi ku ahaan doona taariikhda kubadda cagta, inaan kuwaas hal hal u magacaabana suurtogal ma ahan, sidaa awgeed si wadajir ah ayaan dhammaantood u dhunkanayaa”.
“Sidoo kale waxaan xabadka saarayaa dhammaan Maamuleyaashii, Farsamayaqaannadii iyo Dhaqaatiirtii AC Milan ka dhigay naadi caalamka Kubadda cagtu ku daydo, dadkaasina waxaa ka mid ah waana qofka ugu horreeya ee aan xusayo Adriano Galliani kaas oo ah Madaalihii dhisay iyo Matoorkii ay ku dhaqaaqaysay AC Milan”.
“Intaa waxaa ka sarreeya oo mahad naq ka soo go’ay kashka iyo laabta u dirayaa taageerayaasheenna, Malaayiinta taageerayaasha ah kuwaas oo buuxiyay garoommada kala duwan ee caalamka iyagoo ku qaylinaya “Guuleyso Milan” iyo sidoo kale dadka tirada badan kuwaas oo inkastoo jir ahaan ay nooga fog yihiin haddana aad noogu dhow marka ay timaaddo naxariista iyo xamaasadda”.
“Taageerayaashaas la’aantood Milan-taan ma guuleysateen mana jiri lahayn, iyaga taageeradooda ayaan wax walba ugu guuleysanay”.
“Waxaan rabaa inaan idin iraahdo inaan ka tegayo dhammaan kaalimihii maamul ee naadiga Milan, waxaan ahaan doonaa mar walba taageere Milanese ah, kooxdii uu Aabahay i baray inaan jeclaado anoo carruur ah, kooxdii aan si wadajir ah guulaha u gaarsiinay” ayuu Berlusconi u sheegay taageerayaasha Milan.
“Hoggaamiyeyaasha cusub ee Milan waxaan u rajaynayaa rajadii ugu wanaagsanayd anigoo filaya inay gaari doonaan hadafyo ka sii dheer middii aan sameynay”.
“Mar kale dhammaantiin waa mahadsan tihiin, Silvio Berlusconi”.
TWITTER-KA: Qaar ka mid ah laacibiinttii hore iyo kuwa haatan ee AC Milan oo u mahad celiyay Berlusconi